Ogaden News Agency (ONA) – Daawo Sawiro/ Warbixin- Shirkii Jaliyadaha Ogadenya ee qarada Waqoyiga America oo malintii 1 baad si guul ah ku soo dhamaday.
Daawo Sawiro/ Warbixin- Shirkii Jaliyadaha Ogadenya ee qarada Waqoyiga America oo malintii 1 baad si guul ah ku soo dhamaday.
Maanta oo ahayd malintii 1 baad ee shirkii Jaliyadaha Ogadenya ee qarada waqoyiga America ayaa ahaa shir si wanagsan loo soo agasimay. Shirkan oo ay ku dhanayeen xubnaha golalaha dhexe ee JWXO ee qarada waqoyiga America iyo dhamanba mamulada Jaliyadaha Ogadenya ee qarada waqoyiga America ayaa malinkii kobad waxaa lagaga hadlayay labo qodob. Qodobka kobad oo ahaa is waraysi/warbixino iyo qodobka labad oo ahaa wada tashi ku sabsan horumarinta Halganka iyo turida heryada gumaysiga.
Dhamanba gudomiyayashii Jaliyadaha Ogadenya ee shirka yimid ayaa laga dhagaystay war bixino. Gudomiyayasha ayaa soo bandhigay qabdhismeedka jaliyadaha ay matalaan, melaha ay ka howl galaan iyo sida ay u gutan wajibadkiooda halgan. Waxaa kale oo ay mamuladu soo bandhigeen qorshoyinka halgan ee ay higsanayaan inay ku talaba qadan sanadka 2016.
Dhanka kalana waxaa laga wadahadlay qodob doodeed ku saabsanaa sidii loo dardar galin lahaa howlaha halganka si loo soo dadajiyo turida heeryada gumaysiga iyo hanashada dhulka Ogadenya. Qodobkan oo ahaa qodob muhiim ah ayaa si waafiya lo lafa guray ayaadoo ay xubnaha ururka iyo masuliyinta JWXO ay dhamanba fursad uwada heleen inuu rux kasta fikirkiisa ka dhiibto qodobkan.
Shikii malintii 1 aad ee manta furmay ayaa jawi aad u wangsan kusoo dhamaaday waxana malinta bari ah loo balansanaya inuu shirku abaare 11am sacada gobolka Minnesota halkiisii kasii bilowdo.
Akhristayashanada qadarinta mudan waxaanu ku wargalinayanaa inan idinla wadaagi doono sida uu shirku ku bilowdo iyo sida uu ku dhamado bari Insh Allah. Haka foganin wehelkaaga wararka xaqiiqada ah ee ONA.